ụlọ nkuzi tinye mason na-arụ ọrụ metser-diender
Na usoro Metrelen Basic Techniques, ị ga-atụ ma tụọ akụkụ. Ị ga-amụta ngwá ndị na-eji atụ ihe ma jiri ntanetị rụọ ọrụ. Ị ga-amụtakwa ịmepụta ngwa agha, ihe ọkụkụ, obere ihe na-emepụta ihe ma tinye. Ọ bụrụ na ị mechara nke a, ị nwere ike ịrụ ọrụ nke onwe onye dị nta. N'ebe onye were gị n'ọrụ, ịnwere ike inyere onye ọrụ mpempe akwụkwọ nwere ahụmahụ aka wuo mgbidi ma ọ bụ tụọ ọnụ ụzọ windo. Ịnwere ike ịga n'ihu na ụlọ ọrụ na ntinye ntinye nke usoro ihe owuwu ahụ.
Na nhazi ntinye na-agbanwe agbanwe, ị ga-amụta otú ị ga-esi rụzie nrụzi na otú ị ga-esi kwadebe ọrụ ọrụ.
Ị mụtara ịrụ njikọ, wuo ihe owuwu ma jikọta ihe ndozi.
Ị mụtara ịrụzi ma rụchaa mgbakwunye.
Na nchịkọta nke Ciment, ị ga-abanye n'ime imezi ihe na ịrụ ọrụ nkwadebe.
Ị mụtara ịmepụta ihe ịme ihe, rụọ mgbakwunye, weghachite na imecha.
A na-arụghachi nkwonkwo dị ukwuu n'oge arụgharịrị. Ịgbakwunye mgbidi ọhụrụ bụ ọrụ nke ịchọtara na mbụ (ọhụrụ).
Ụlọ ọrụ ọzụzụ na-ewere na nkezi abụọ ruo afọ ise.
Na akwụkwọ nke adder Ị kwenyesiri ike banyere ọrụ?
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkọwapụta, ị nwere ike ịnọgide na-arụ ọrụ dị ka Mason.
Masons nwere nnọọ mmasị n'ahịa.
Ekwesighi inwe ihe omuma nke puru iche iche maka usoro omumu.